Weron a VPN esekwe kwiprotocol yeWebRTC | Ukusuka kwiLinux
Ubumnyama | 13/05/2022 00:02 | Izicelo
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo kwavela iindaba zokuba inguqulelo yokuqala ye-Weron VPN yakhululwa, eyiprojekthi ejolise ekuvumeleni ukudalwa kothungelwano oluthe kratya oludibanisa iinginginya ezisasazekileyo ngokwejografi kuthungelwano lwenyani, olunode lusebenzisana ngokuthe ngqo (P2P).
Kugxininiswe ukuba ngaphakathi kweempawu eziphambili zeWeron yileyo ingasetyenziselwa ukwenza uthungelwano olulodwa lwentembeko ezidibanisa iinginginya zasekhaya kunye neenkqubo ezisebenza kwiimeko zefu. Umgangatho ophantsi wokusebenzisa i-WebRTC kuthungelwano lwe-latency ephantsi yenza kube lula ukwenza uthungelwano olusekwe kwi-Weron ekhuselekileyo yasekhaya ukukhusela i-traffic phakathi kwenginginya ngaphakathi kwinethiwekhi yendawo.
Olunye uphawu oluphambili lwale projekthi kukuba i-API inikezelwe kubaphuhlisi benze ezabo izicelo ezisasaziweyo ezineempawu ezinjengokuqalisa koqhagamshelo oluzenzekelayo kunye nokuseka amajelo onxibelelwano amaninzi ngexesha elinye.
Ukongeza koku, kukwagxininiswa ukuba Uthungelwano lweIP lwenyani luyaxhaswa (uluhlu lwe-3) kunye neenethiwekhi ze-Ethernet (uluhlu 2).
Ngokubhekiselele kwinxalenye yohluko oluphambili kunye nezinye iiprojekthi ezifanayo ezifana ne-Tailcale, i-WireGuard kunye ne-ZeroTier, kukusetyenziswa kwe-protocol ye-WebRTC yokusebenzisana kweenodi kwinethiwekhi ebonakalayo.
Olona ncedo luphambili oluthathwa yiprojekthi kukuba ngokusebenzisa iWebRTC njengothutho, ukuchasana nokuthintela itrafikhi yeVPN kukhulu, kuba le protocol isetyenziswa ngenkuthalo kwiividiyo ezidumileyo kunye neenkqubo zenkomfa zomsindo ezifana neZoom.
Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba i-WebRTC nayo ivelele ngenxa yokuba inikezela ngaphandle kwebhokisi izixhobo zokufikelela kumahostela agijima emva kwe-NAT kunye nokudlula i-firewall yenkampani usebenzisa i-STUN kunye ne-TURN protocol. Ngaloo ndlela, iprojekthi ye-Weron iphawuleka ngokubonelela ngazo zonke izixhobo zokwenza lula, ngokukhawuleza, kunye nokhuseleko lweenethiwekhi ezingaphezulu ezisekwe kwiWebRTC.
Kwezinye iimpawu ezibalaseleyo kule projekthi, ezi zilandelayo zikhankanyiwe:
Ivumela ukwenza iindawo zofikelelo ngasemva kwe-NAT: Ngenxa yokuba i-weron isebenzisa iWebRTC ukuseka imidibaniso phakathi kweendawo zokuhlala, unokuwela ngokulula iifirewall zenkampani kunye ne-NAT usebenzisa i-STUN, okanye usebenzise iseva ye-TURN kwitonela yetrafikhi. Oku kunokuba luncedo kakhulu, umzekelo, kwi-SSH kwilebhu yakho yasekhaya ngaphandle kokudlulisela nawaphi na amazibuko kumzila wakho.
Inika amandla okukhusela inethiwekhi yasekhayaa: Ngenxa yobuninzi obuphantsi be-WebRTC kuthungelwano lwe-latency ephantsi, i-weron ingasetyenziselwa ukukhusela i-traffic phakathi kwee-nodes kwi-LAN ngaphandle kokuchaphazela kakhulu ukusebenza.
Ikuvumela ukuba ujoyine iindawo zokuhlala kwinethiwekhi yamafu- Ukuba uyabaleka, umzekelo, iqela le-Kubernetes elinee-nodes ezisekwe kwilifu kodwa kwakhona ufuna ukudibanisa iindawo zakho zasekhaya kunye, ungasebenzisa i-weron ukwenza inethiwekhi ethembekileyo.
bathintele ukujongwa-Isiseko seWebRTC suite, apho izixhobo zenkomfa yevidiyo ezidumileyo ezinje Zoom, Amaqela, kunye neNtlanganiso zisekwe, kunzima ukuyivalela kwinqanaba lenethiwekhi, iyenza ibe lulongezelelo oluxabisekileyo kwibhokisi yakho yezixhobo zokuthintela ukujongwa kukarhulumente okanye iqumrhu.
Bhala eyakho iprothokholi yokukhomba-kwinqaku: I-API elula yenza kube lula ukubhala izicelo ezisasazwayo kunye nokudibanisa ngokuzenzekelayo, iziteshi ezininzi zedatha, njl.
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi ngakumbi malunga ne malunga neprojekthi, kufuneka wazi ukuba ikhowudi yeprojekthi ibhalwe kwi-Go kwaye isasazwe phantsi kwelayisensi ye-AGPLv3. Ulwakhiwo olusele lulungiselelwe iLinux, iFreeBSD, iOpenBSD, iNetBSD, iSolaris, iMacOS, kunye neWindows.
Uyifaka njani iWeron kwiLinux?
Kwabo banomdla wokukwazi ukufaka i-Weron kwiinkqubo zabo, banokuyenza ngendlela elula kakhulu kwaye inokwenziwa ukusuka phantse kuyo nayiphi na i-Linux yangoku.
Ukukwazi ukwenza ufakelo, vula ngokulula i-terminal kwaye kuyo siza kuchwetheza le miyalelo ilandelayo:
Ukuze ufunde ngakumbi malunga nokusetyenziswa kwe-Weron, unokubonisana eli khonkco lilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izicelo » Weron a VPN esekwe kwiprotocol yeWebRTC
I-Webrtc ivuza, i-ip yakho ihluziwe kunye nokunye okuninzi, eyona nto ingcono kakhulu i-vpn ehlawulweyo, evimba ngokuchanekileyo i-webrtc kwaye isekelwe kwi-wireguard, eyona protocol ingcono namhlanje.